Ilaalchi Of-tuulummaa Sanymmaa Booddessaa fi Kufaa dha | Kichuu
(Ibsa adda Bilisummaa Oromoo), Ebla 22, 2021
Ummatootni Itophiyaa waggoota dheeraaf bittoota Itophiyaa gara jabeessa dabareen isaan bitaa turan jalatti hammeenyaa dorgomaa hin qabneen dhamaafamuun hundaaf ifaa dha. Hundaan olittis ummatni Oromoo biyya isaa irratti diina taasifamee ajjeeffamaa fi qabeenyi isaa saamamaa ture. Addatti mootota biyyattiin ajjeechaan irratti geggeeffame sanyii duguuggaan wal gita. Bittaan alagummaa ummata Oromoo irratti xiyyeeffate kun hanga yeroo dhihoo garee shiftaa fi saamtotaa ABUTqabsoo Qeerroo fi ummatootaan aangoo irraa qaarsifametti itti fufee biyya isaa irratti alagoomfamaa, qabeenya isaa irratti ajajuu kan hin dandeenye, mirga kan barbaaduu fi filate jalatti hin bulle waan tureef sirna cunqursaa kana of irraa busuuf wareegamni baase ulfaataa ture. Addatti dhumiinsa ilmaan Oromoo fi ummatoota Itophiyaaf gaafatamaa kan tahe adaba ummataan qabriin isaa raawwatame, garee Wayyaanee irratti qabsoon geggeeffame hagam ulfaataa akka ture ummatoota Itophiyaa biratti hin dagatamu. Falmaa kana keessattis goototni ilmaan Oromoo fi Itophiyaa kumootaan kitimaa tahuu ummatoota Itophiyaa fi Oromoo jalaa dhokataa hin tahu.
Ummatni Oromoo waggoota dheeraaf ajjeechaa, hidhaa fi dararaa adda addaa irra gahaa ture kan abbootii irree fi bittoota dura dhaabbatuun wareegama ulfaataa baasaa tureef wayta ammaa akka ilmaan bittootaa fi saamtotaa akkasumas hambootni Wayyaanee jedhanii fi ololanitti dantaa addaa barbaachaaf hin turre. Kan qabsaawee fi ilmaan isaa qaqqaalii kan wareega baasan bilisummaa, haqaa fi walqixxummaaf jecha. Kanas ofii qofa osoo hin taane ummatoota Itophiyaa hundaaf akka dhugoomu hawwuun malee akeeka moggeessaa fi diiggaa ummatoota irratti fe’uuf ittiin masakamu ajandaa dhoksaa bocate hin qabu..
Dhaabni keenya ABOn ummata Oromoo wareegama isaatiin Itophiyaanota bilisoomsaa kan turee fi jiru keessaa waan dhalateef waggoota dheeraa qabsoon dabarse keessatti “ ummatni Oromoo cunqursaa jalaa walaboomuun ummatoota Itophiyaa hunda bilisummaa gonfachiisa” akeeka jedhuun wareega baasaa akka ture seenaa qabsoo isaa keessaa dubbifama. Kunis kunoo dhugoomee sirni cunqursaa inni maayii akka hin deebinetti geggeeffameera.
Injifannoo argame kana irra dhaabbatuun ummatootni dimokraasii, nagaa fi obbolummaa waaraa argamsiisuuf tattaafatuu irratti argamu. Dhaabni keenya ABOn kanneen ummata keenya irraan miidhaa ol aanaa geessisaa turan kanneen lubbuun jiran seeraan akka gaafataman, godaannisa bara dheeraa ummata keenya irraa mul’atu seenaaf dhiifnee haaloo osoo hin qabatin imaammata nagaan waliin jiraachuu fi ollummaa gaarii kan hojjetu tahuu miseensotaa fi deggertoota isaa hubachiisaa adeemsa gara sirna dimkraasiitti ceesisu milkeessuuf, akkasumas fedhiin ummatootaa akka dhugoomuuf jabinaan hojjatuu irratti argama.
Haa tahu malee humnooti farra dimokraasii fi of-tuulummaa sanyummaa babal’isan rakkoolee yeroo cehumsaa mudachuu dandahanitti gargaaramanii sirna booddetti hafaa fi dulloomaa akaakilii isaanii deebisanii sabaa fi sab-lammota kaan irratti fe’uuf abjootan biyyattii nagaa dhorkatanii waan hawwan aargachuuf bakkoota adda addaatti ibidda qabsiisaa jiru. Warra akkasiif biyya jechuun kan sanyiin isaanii yoo bite malee biyya tahuu hin dandeenye, biyya warra mootii (dynastic state) qabiyyee dhuunfaa sanyii warra mootii dacheen hundi kan isaanii, aangoonis Waaqa biraa kan nuuf kenname jedhanii lallabu, amanu. Sabboonummaa sabummaa fi eenyummaa balleessanii of tuulummaa sanyummaa babal’isuuf warra abjootaa jirani dha.
Ilaalchi of-tulummaa sanyummaa saboota biroo humnaan weeraruun cunqursuu fi hacuucuu, aadaa fi afaan isaanii haquu, namoota qomoo ofii hin taane lafa irraa buqqisuu fi biyyaa ari’uu, itti roorrisuu fi jimulaan fixuu fi kkf dha. Ilaalchi alaabaa, faaruu alaabaa biyyoolessaa fi mallattoolee eenyummaa saba ofii akka mallattoo siyaasaatti osoo hin taane akka mallattoo amantiitti dhiheessuuf tattaafata. Yaada sabni ykn sanyiin isaanii uumaadhaan saboota ykn qomoowwan biroo ol jedhuu fi qomoowwan biroo weeraruu fi saboota kaan dhabamsiisuuf akka waan mirga qabnaniif Waaqayyo isaaniif eebbiseetti of amansiisu. Warra Ilaalcha booddessaa jaarraa 21ffaa keessa addunyaa kana irra ni jiraata jedhamee hin yaadamne tarkaanfachiisaa jiraniin seenaa irraa baradhaa jenna.
Harcaatotaa fi ergamtootni, ilmaan bittootaa fi saamtotaa keessaahuu dirree baasanii ummata Oromoo abaaraa, xiqqeessaa fi lola irratti labsaa jirua. Gochaan kun Adda Bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo keessaa fi alaan guddoo dheekkamsiisaa jira. Hawwitooti sirna durii dhaadannoo fi barruulee hedduu qaanfachiisoo, obbolummaa ummatootaa haphisan, biyyattii nagaa fi sabatinsa dhorkan, mirga ummatni Oromoo fi ummatootni biroo wareegama ofiitiin mirkaneeffatan, mirga ofiin of bulchuu kan balaaleffatu dha. Addatti immoo “Oromummaan haa dhabamu! Godinni addaa Oromoo haa diigamu!” jechuun dhaadannooleen isaan dhageessisan aggaammii Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuu fi daangaa Oromiyaa diiguuf aggaamama jiru tahuu kan dhimmi Oromoo na galcha jedhu hundi qalbifachu qaba. Haasaa jibbiinsaa fi gochaa duguuggaa sanyii of-tuultotaa of irraa qolachuun gahee lammiilee Oromoo hundaa ti. Dabalees akeeki siyaasaa dhaadanoo isaanii irraa calaqqisu kan heera mootummaa federeshinii sabaa fi sab-lammotaa diiguu nutti agarsiisa. Dachee Oromoon irra qubatee jiru Salaalee hanga Moyaaleetti Walloo hanga Wallaggaatti lafa akaakilii fi abaabilii keenyaa Oromoon nu irraa fudhate dha jedhanii uummata keessaa dhalanne jedhan Oromoo irratti kakaasu. Gochaan isaanii kun yakka ol aana waan taheef silaa seerri kan sirriitti hojii irra oolu tahee adabi isaa ol aanaa dha. Oromummaa dhabamsiisanii Amarummaa aangoomsuu yaaluun yaada doofaa fi daallee qofa osoo hin taane abadan yoomiyyuu kan hin danda’amne waan taheef yeroodhaan akeeka isaanii diigaa kana irraa akka dhaabbatan hubachiifna.
Addi Bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo ilaalcha farra Oromoo fi Oromummaa irratti eenyuuf iyyuu hin hilan. Of-irraa ittisu. Gorroo abbaatu hordata roorroo abbaatu dhorkata jedhu mitii ree! Akkasumas sochii, Heera biyyaa hanga taheefuu gaaffii mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa sabootaa beeke haquuf, taasifamu dura dhaabbatna. Sochiin booddessaan kun Ummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sab-lammooti uummata Oromoo wajjin hiree wal fakkaataa qaban hundi dammaqiinsaan of irraa ittisuu qaban. Kanneen mirgoota dimokraasii fi wal qixxummaa uummatootaaf qabsaa’an hundi ilaalcha diigaa fi farra uummatootaa tahe kana saaxiluu fi irratti qabsaawuutu irraa eegama. Hiree kanaan kanneen akeeka farrummaa kana tarkaanfachiiftan obsi ummataa sodaa isinitti fakkaatee ittoo seetani akka mimmixa hin cuubanne gorsaa fi dhaamsa keenya isiniif dabarsina.
Kanneen akeeka farra dimokraasii fi wal qixxummaa uummatootaa tarkaanfachiisuun sirna bittaa cunqursaa fi saaminsaa deebisuuf abjootan, ummata Oromoos tahee ummatoota Itophiyaa boodatti deebisuun matumaa isiniif hin dandahamuu walitti bu’iinsa oomishuu irraa dhaabbadhaa of ilaalaa jenna. Uummati Amhaara maqaa isaatiin daldalamus obbolummaa fi ollummaa Oromoo waliin qaban tikfachuuf farreen akkanaa of keessaa gulaalee akka baasu waamicha keenya dabarsina.
Ebla 22, 2021
Gibiraa fi Qaraxni Bittoota Irroomsu Mormamuu Qaba-(Ibsa ABO)